श्राद्ध किन गर्ने ? « Nepali Digital Newspaper
श्राद्ध किन गर्ने ?
८ आश्विन २०७६, बुधबार ००:५०
जीवन र मृत्युको बीचमा एउटा मात्रै कुरा छ, त्यो हो सास । हामीले सास फेर्न छोड्यौँ या सकेनौँ भने मृत शरीरमा परिणत हुन्छौँ । मान्छे मरेपछि के हुन्छ ? कहाँ जान्छ ? यस्तै हुन्छ, यहीँ पुग्छ भनेर अहिलेसम्म कसैले भन्न सकेको छैन । तर, पनि स्वर्ग र नर्कको परिकल्पना भने गरिएको छ । मरेपछि पनि सुखद अनुभूति गर्ने अवस्थामा पुग्यो या रह्यो भने स्वर्ग, कष्ट भोग्नुपर्ने या दुःखद अनुभूति गर्ने अवस्था आए, नर्क । स्वर्ग र नर्क भौगोलिक स्थान नभएर अनुभूति गर्ने अवस्था हुन् भन्न सकिन्छ ।
मानिस मरे पनि आत्मा जीवित रहन्छ भन्ने छ । जसका कारण शरीर मरेपछि पनि आत्माले शरीरमा पुनः प्रवेश गर्ने कोसिस गरिरहन्छ भनेर गुरु, सद्गुरुहरूले भनेको पाइन्छ । मृत्युमा पनि सामान्य मृत्यु र अकस्मातै या भनौँ दुर्घटनालगायतबाट हुने मृत्युमा फरक हुने र अकस्मात् मृत्यु हुनेहरूको आत्मा बढी भड्किन्छ भन्ने छ । सामान्यतया मानिस मरेपछि चार–पाँच घन्टाभित्र जलाइसक्नु भन्ने भए पनि हिजोआज कतिका सन्तान बाहिर बस्ने हुँदा केही दिन अस्पतालमा राख्नुपर्ने अवस्था पनि छ ।
हिन्दू धर्म परम्परामा १३ दिने संस्कारका पछाडि यही आत्माको भड्काव महत्वपूर्ण पक्ष हो भन्न सकिन्छ । यद्यपि काजकिरियाका रूपमा १३ दिनसम्म या आफ्नो परम्पराअनुरूप आफन्तको शोक बार्नु मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि धेरै महत्वपूर्ण छ । आफ्नो मान्छेको मृत्युको पीडाबाट बाहिरिनका लागि १३ दिने संस्कारले हिलिङको काम गरिरहेको हुन्छ । आफन्तहरू आउँछन्, जान्छन, के भएको थियो, कसो भएको थियो भन्छन्, बाँच्दा जे–जस्तो व्यवहार गरे पनि मरेर गएपछि कस्तो राम्रो मानिस हुनुहुन्थ्यो भन्छन् । यस्ता कुराले बिस्तारो–बिस्तारो मानिसलाई आफन्तको मृत्युलाई सहज रूपमा लिन मद्दत पुग्छ । अर्को कुरा, शरीर मरेर गए पनि आलो आत्मालाई प्रत्येक दिनको संस्कारमा चढाइने खानेकुरा, पानीलगायतले तृप्त गर्छ भन्ने पनि छ ।
आफ्नो मान्छेको मृत्युको पीडाबाट बाहिरिनका लागि १३ दिने संस्कारले हिलिङको काम गरिरहेको हुन्छ । आफन्तहरू आउँछन्, जान्छन, के भएको थियो, कसो भएको थियो भन्छन्, बाँच्दा जे–जस्तो व्यवहार गरे पनि मरेर गएपछि कस्तो राम्रो मानिस हुनुहुन्थ्यो भन्छन् ।
हामीकहाँ काजकिरिया विभिन्न जातजातिमा फरक छ । कतिपय जनजातिमा तीन दिन मात्र काजकिरिया गर्ने चलन छ । सम्पत्तिलगायतका कुरामा मोह बढी भएका मानिसलाई मोक्ष प्राप्तिका लागि समय लाग्ने र मोह कम हुनेहरू चाँडै मुक्त हुने मान्यता पनि छ । यसरी हेर्दा बाहुन–क्षेत्रीलाई भन्दा जनजातिलाई मोह कम भएर काजकिरिया पनि कम भएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ । सन्न्यास लिएका साधुहरूलाई पनि जिन्दगी र सम्पत्तिप्रतिको मोह हुँदैन । उनीहरूको काजकिरियाको प्रक्रिया पनि छोटो हुन्छ ।
मानिस मरेपछि सुरुमा १३ दिन, त्यसपछि ४५ दिन र एक वर्षसम्म प्रत्येक महिना मासिक श्राद्ध र पछि वर्षमा एकपल्ट तिथि मिलाएर श्राद्ध गरिन्छ । यसैगरी पितृका नाममा प्रत्येक वर्ष सोह्रश्राद्धमा श्राद्ध गरिन्छ ।
श्राद्धको अर्थ श्रद्धा हो, आफ्ना पितापुर्खाप्रतिको श्रद्धा । हिन्दूधर्मको सबैभन्दा राम्रो पक्ष मृत्यु वरण गरेका र जीवित सबै आफन्तका लागि सम्मान व्यक्त गर्न कुनै न कुनै पर्व र तिथिहरू छन । दाजुभाइ, दिदीबहिनी, बाबुआमाका लागि मात्र नभएर पितृहरूलाई सम्झनका लागि पनि विशेष समय छुट्याइएको छ, त्यो हो सोह्रश्राद्ध । श्राद्ध पितृ (पुर्खा) को सम्झना र संस्कृतिको माध्यमबाट उहाँहरूसँगको सम्पर्कसँग जोडिएको छ । हामीले जतिसुकै इन्कार गरौँ हाम्रा पुर्खाको कुनै न कुनै अंश हामीसँग शारीरिक रूपमा जोडिएर आएको हुन्छ । कसैको नाक हजुरबुबा, जिजुबुबा या हजुरआमा, जिजुआमासँग मिल्छ कसैको आँखा त कसैको पूरै अनुहार ।
श्राद्ध यो संसारमा आफ्नो उपस्थितिको आदर पनि हो । पुर्खालाई संवेदनशील भएर तर्पण दिनुको अर्थ उहाँहरूप्रति संवेदनशील भएर आत्मालाई तृप्त पार्ने कोसिस हो । हावाले बास्ना लिएर फूलचाहिँ बोटमै छोडिदिएजस्तो शरीरलाई छोडेर आत्माचाहिँ डुलिरहेको हुन्छ या जीवितै हुन्छ भन्ने मान्यतामा रहेर श्राद्धले निरन्तरता पाएको हो । श्राद्ध गरेपछि मैले तिमीहरूले दिएको पाएँ भन्नेहरू भेटिएका छैनन् होला, तर श्राद्ध नगर्ने, काजकिरिया नभएका कतिपय आत्माहरूले अरूको शरीरमा आएर मैले खान पाइनँ, म मोक्ष भएको छैन भनेका अनेक उदाहरणहरू हाम्रो समाजमा छन् । त्यसप्रकारका कुरा सुनेपछि कतिले पुस्तौँअघिका आफ्ना पुर्खाको मृत्यु–संस्कार गरेका घटनाहरू पनि छन् ।
पुर्खालाई संवेदनशील भएर तर्पण दिनुको अर्थ उहाँहरूप्रति संवेदनशील भएर आत्मालाई तृप्त पार्ने कोसिस हो । हावाले बास्ना लिएर फूलचाहिँ बोटमै छोडिदिएजस्तो शरीरलाई छोडेर आत्माचाहिँ डुलिरहेको हुन्छ या जीवितै हुन्छ भन्ने मान्यतामा रहेर श्राद्धले निरन्तरता पाएको हो ।
मृत्यु–संस्कार गर्नुअघि र गर्दै गर्दा आत्माले आफन्तको शरीरमा पस्ने कोसिस गर्ने भएकाले आत्माको मुक्तिको कुरा गर्नेहरू पनि छन् । मान्छे जिउँदो हुँदा स्वतन्त्रता चाहन्छ र मरेपछि पनि मुक्ति नै चाहन्छ । मोक्ष, मुक्ति, पुनर्जन्मजस्ता कुरा हिन्दू शास्त्रहरूमा उल्लेख गरिएको छ । कतिपयले हिजोआज अब समयअनुसार चलन, परम्परा पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ, कहाँ श्राद्ध गर्नु ? यसो जल चढायो भइहाल्छ नि, मनले पो मान्ने हो भनेको पनि सुनिन्छ । तर, कतिपय हाम्रा परम्पराहरू नसोचीकन चलाइएका छैनन् । निश्चय नै जतिसुकै निकटवर्ती भए पनि मरिसकेको मानिसले मैले पाएँ या पाइनँ भन्दैन, त्यसैले विश्वास, अन्धविश्वास जे माने पनि हुन्छ, तर पुर्खाप्रतिको श्रद्धा आदर र सम्मान हो । जुन श्रद्धा मानिसहरूले श्राद्धमार्फत गर्छन् । यदि तिथि, श्राद्धजस्ता कुराहरू हुँदैनथे त मानिसले आफ्नो पृष्ठभूमिलाई संवेदनशील भएर सम्मान व्यक्त गर्ने अवसर पनि पाउँदैन थिए होला । हिन्दूधर्मका धेरै राम्रा कुरामध्ये श्राद्ध पनि एक हो । सोह्रश्राद्ध भनेर सोह्र दिनसम्म सबै पितृलाई सम्झनका लागि विशेष समय छुट्याइएको छ । यसलाई पितृप्रतिको सामूहिक सम्मान पनि भन्न मिल्छ ।
महाभारतको युद्धमा जब कर्णको मृत्यु भयो उनी सीधै स्वर्ग गए । स्वर्गमा कर्णलाई सुनको थालमा राखेर सुन नै खानका लागि दिइन्छ । सुन खान सक्ने कुरा भएन, अति भोक लागेपछि कर्णले स्वर्गका राजा इन्द्रसँग आफूलाई खानाको साटो किन सुन दिइयो भनेर सोध्दा कर्णले सधँै सुन मात्रै दान गरेकाले खानाको रूपमा सुन पाएको जवाफ पाउँछन् । दानी भनेर कहलिएका कर्णले कहिल्यै कसैलाई खाना, वस्त्रजस्ता कुरा दान गरेका हुँदैनन् । अब के गर्ने ? इन्द्रसँगको सल्लाहमा कर्ण स्वर्गबाट १६ दिनका लागि पृथ्वीमा आएर भोजन र पानी दान गर्छन् । जीवित मानिसहरूका लागि मात्र नभएर उनले पितृले समेत पाउने गरी दान गरेकाले त्यही समयदेखि श्राद्धको चलन बस्यो भन्ने मान्यता छ । यसले मानिसका लागि सुन, हीरा, मोतीभन्दा खाना र पानीको महत्व दर्शाउँछ । साथै खानेकुरा बाँडेर खान र खान नपुग्नेहरूलाई खुवाउन प्रेरित गर्छ । सामान्यतया हामीकहाँ ‘अन्नपानीको शरीर’ भन्ने चलन छ । मानिस बाँचुन्जेल खानाको सन्तुलन मिलाउन आवश्यक छ, श्राद्धमा पनि जल र भोजन नै पितृलाई चढाइन्छ । विश्वास या अन्धविश्वास आफ्ना ठाउँमा होलान्, पितृको सम्मान र पुर्खासँगको ‘कनेक्सन’का लागि श्राद्ध महत्वपूर्ण छ । विगतमा छोराले गर्ने चलन भए पनि सन्तान छोरा या छोरी जसले गरे पनि हुन्छ ।
धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक सोमबार पनि दोहोरो अङ्कले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार लगातार उकालो
‘राष्ट्रिय शक्ति नेपाल’को संयोजन एवम् आह्वानमा राजधानी काठमाडौंमा राजसंस्था र हिन्दू राज्य पुनःस्थापनाको माग गर्दै प्रदर्शन भएको छ । काठमाडौंका
प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले नेपाल र भारतबीचको संवाद पूूर्वस्थितिमै फर्केको बताएका छन् । राजधानीमा सोमबार आयोजित साक्षात्कारमा
संक्रमणबाट २४ घण्टामा थप २९ को मृत्यु, कुल संक्रमित संख्या २,३३,४५२
पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा थप १,४७४ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो